Posted by: chhepyastra weekly | अगस्ट 6, 2011
संविधान समयमै नआउनु पछाडि काग्रेसको यथास्थितिवादी सोच र एमालेको ढुलमुले प्रवृत्ति जिम्मेवार छ
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, स्थायी समिति सदस्य- एनेकपा माओवादी
० तपाईंले भर्खरै मात्र ‘माओवादी बिगि्रएको छैन भत्किएको छैन’ भन्ने बोलको गीत रचना गर्नुभएको छ, यो रचना गर्नुको आशय के हो, प्रस्ट पारिदिनुस् न ?
साहित्य र साहित्यिक भावना, एउटा परिस्थिति र त्यसमा चल्ने संघर्षहरू, हामीले लिएका राजनीतिक उद्देश्य र त्यो उद्देश्यप्रति उठेका प्रश्नहरू, जनताप्रतिको दायित्वबोध, जनताका अपेक्षाहरू आदिसाग जोडिएर प्रतिबिम्बित हुने विषय हो । कहिलेकाही साथीहरूले अनुरोध गर्दा आफूभित्र पैदा भएका भावनाहरू, आन्दोलनमा देखापरेका परिदृश्यहरूलाई समेटेर मैले गीत लेख्ने गरेको छु । अहिले माओवादी पार्टी, तिनका नेताका ’boutमा प्रश्न उठेको छ, आशंकाहरू पैदा भएकोछ, भ्रम प्रचार गरिएको छ, माओवादी पनि अरुजस्तै बुर्जुवावर्गमा परिणत हुन्छन् कि, अभिजातवर्गमा बद्लिएको, जनताका बीचमा र्फकंदैनन् कि, जनताप्रति गरेका हिजोका प्रतिबद्धता पूरा गर्दैनन् कि भन्ने जो सन्देह उठेको र केही माओवादीहरूमा विचलन देखापरे पनि सिङ्गो माओवादीचाहिा अहिले पनि संकल्प बढ्छ भन्ने सन्देश दिने उक्त गीत लेखेको हुा ।
० भनेपछि माओवादीभित्र केही विचलन आएको तपाईंले पनि महसुस गर्नुभएको छ ?
निश्चितरूपमा माओवादीमा विचलन आएको हो । हामी अहिले पनि एउटा संघर्षमा छौ। हामी पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष वा लाइन संघर्षमा छौ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्टीमा देखापरेको खराब प्रवृत्ति र सही प्रवृत्तिबीचको लडाइा हो । यो असफल र खराबबीचको लडाइा हो । पार्टीभित्र चलेको अन्तरसंघर्षबाट विचलन हुनुपर्ने, हैरान हुनुपर्ने, वितृष्ण्त हुनुपर्ने अवस्था भने छैन ।
० तर, तपाईंले भनेभन्दा विपरीत माओवादी नेताहरू आ-आˆना पक्षका मान्छेलाई पद, प्रतिष्ठा र पैसा दिलाउन पार्टीमा अन्तरसंघर्ष चलाएका हुन् भन्ने पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको आरोप छ नि ?
कम्म्युनिस्ट पार्टीभित्र हुने विचार संघर्ष, लाइनसंघर्ष, अन्तरसंघर्ष आˆनो अनुकूलतामा व्याख्या एवं प्रयोग गर्ने समस्या कम्युनिस्ट छ । पार्टीभित्रको लाइनसंघर्ष, अन्तरसंघर्षलाई अरु पार्टी, अरु नेता, आफूभन्दा बाहिरको लागि बढो सैद्धान्तिक ढङ्गले व्याख्या गर्ने, आˆनै पार्टीभित्र, आˆनो समूहमा बहस हुादा स्वीकार गर्न नसक्ने र त्यसलाई अवैधानिक, अराजनीतिक र अवैचारिक ढङ्गले व्याख्या गर्दै एउटा गलत प्रवृत्ति रहिआएको छ । त्यसको शिकार हाम्रो पार्टीमा केही साथीहरू भएको महसुस हुन्छ । हाम्रो पार्टीमा केही विचारहरूमा अन्तर परेको छ । खासगरी, नेपाली क्रान्तिलाई कसरी सम्पन्न गर्ने, जनताको संविधान त्यसभित्र संघीयता, महिला र दलितको अधिकार, भूमिसुधार, मजदुरका अधिकारहरूलाई कसरी संविधानमा सुरक्षित गर्ने या नगर्ने, केही साथीहरूलाई अहिले संविधानमा सुनिश्चित नगरे पनि हुन्छ, पछि गएर गरे पनि हुन्छ भन्ने लागेको छ । तर हामीलाई जनताका अधिकार संविधानमा अहिल्यै सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । हामी राष्ट्रिय सेना अहिल्यै निर्माण गर्नुपर्छ भनिरहेका छौ, केही साथीहरू त्याग कामपछि गर्दा पनि हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ । अहिले यही विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र बहस छ । हाम्रो बडो दुःख, कष्टका साथ शुद्ध एउटा विचार, आदर्श र नीतिको अध्यक्षमा लडिराखेका छौ । न हामीसाग स्रोत र साधन छन्, हामीसाग पुाजी छ न हामीले अहिले त्यति ठूलो प्रयोग नै गरेका छौ न अहिले शक्तिको प्रयोग गर्ने अवस्था छ । सबैको बीचमा जो साथीहरूले गलत प्रचार गर्नुभएको छ, त्यो भद्दा अभिव्यक्ति हो, मलाई लाग्छ । त्यसको कुनै तुक छैन । हामीले जुन संघर्ष गरेका छौ, त्यो विचार, नीति र कार्यक्रममा अन्तर परेकै कारण गरेका छौ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।
० तपाईंहरूले आˆनै गलत प्रचारलाई गोयवल्सशैली भनेर विरोध गर्दै आउनुभएको छ । तर, अहिले आˆनै पार्टीभित्र त्यो शैली आˆनै नेता, कार्यकर्ताहरूले अपनाइरहेको देख्दा कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
विचार सही नहुनेहरूले, नैतिकता र आदर्शहरू गुमाएका मान्छेहरूले, त्यसबाट च्युत भएका मान्छेहरूले राजनीतिक बहसलाई सन्तुलित गर्न सक्दैनन् । त्यसलाई उनीहरूले विकृत, भ्रष्ट गर्छन् र दुष्प्रचारमा लैजान्छन् । दुष्प्रचारवश आˆना गल्ती, कमजोरी हो । नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ । अहिले हाम्रो पार्टी पनि त्यसको केही प्रभाव देखापरेका छन् । केही साथीहरू केही छोटो समयको लागि मात्र भए पनि गलत प्रचार गरेर आˆनो गल्ती, कमजोरीबाट लुक्न खोज्ने दुष्प्रयासमा लागेका छन् । तर, झूटमुट नै हो, असत्य, असत्य नै हो । झुटले एकछिन मान्छेलाई कन्ˆयुज गर्न खोजे पनि अन्ततः त्यो पर्दाफास हुन्छ । त्यस्ता प्रवृत्तिहरू जनताका अगाडि नाङ्गन्छन् ।
० अब सरकारतर्फ जाऔं, तपाईंहरूले पठाउनुभएको सबै मन्त्रीहरूलाई सपथ गराउादा-नगराउादै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा आइरहेको छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
झलनाथ खनालसाग बनेको गठबन्धन सरकार केही समय अझै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना थियो र छ पनि । हाम्रो पार्टीबाट मन्त्रीहरूको पठाउने, को नपठाउने, टिमलाई फर्काएर अर्को पठाउने, केही साथीलाई फिर्ता बोलाएर नयाा साथीहरू पठाउने यो सबै मामिला झलनाथजीको मामिला होइन, यो कााग्रेसको मामिला पनि होइन । यो माओवादीको मात्र मामिला हो । माओवादीले आˆनो गठबन्धनलाई व्यवस्थित गर्न आˆनो प्रतिनिधिहरूलाई दुरुस्त गर्न निर्णय गर्ने कुरा हो, त्यसमा अरु पार्टीहरूले टाउका दुखाउनुपर्ने कुनै जरुरी छैन । यो गठबन्धनको कारणले झलनाथजीले राजीनामा दिन लागेको भन्ने त मलाई लाग्दैन । उहाले पछिल्लो समयमा आˆनो अडान कायम गर्न नसके, जो पााच बुादे सहमति गर्नुभयो, सहमतिको सरकार बन्छ भने म छोड्दिन्छु भन्ने जुन सहमतिमा उहााले हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यही आधारमा उहाले राजीनामा दिनुहुन्छ र सहमतिबाट माओवादीको नेतृत्वमा सरकारमा बन्छ भन्ने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । त्यसको जिम्मेवारी लिन साथीहरू तयारै हुनुहुन्छ ।
० तपाईंले माओवादी सरकारको नेतृत्व लिन तयार छ भन्नुभयो तर तपाईंहरूले पार्टीमा सहमतिको सरकारको नेतृत्वको लागि बाबुरामलाई अगाडि सार्नुभएको छ भने अन्य दलहरूले प्रचण्डलाई अगाडि सारिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा यही विषयलाई लिएर तपाईंहरूको पार्टीमा फेरि अन्तरद्वन्द्व चर्कने त होइन ?
अरुले के भन्छन् भन्नेमा अलिअलि त ध्यान दिनुपर्छ तर पूरै त्यसमा हामी भरपर्नु हुादैन । विगतमा पनि हामीले त्यसै गरेका थियौ। कुन नेतालाई कुन जिम्मेवारी दिने ? कसले पार्टी चलाउने, कसले सरकार चलाउने, कसले संगठन चलाउने, कसले आर्थिक विभागमा पठाउने, कसले जनमुक्ति सेना चलाउने यी सबै हाम्रो पार्टीका कार्यविभाजनका मामिला हुन् । उपयुक्त मान्छेलाई हामीले जुनसुकै मोर्चामा खटाउन सक्ने कुरा हो । विगतमा हामीले अध्यक्ष कमरेडलाई सरकारमा पठाएका थियौ । यस पटकचाहिा सर्वसम्मतबाटै बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेका छौ । हामीले जो निर्णय गरेका छौा, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छौ ।
० पार्टीको विगत हेर्दा निर्णय एउटा तरिकाले गर्ने तर कार्यान्वयनमा जादा खुट्टा कमाउने अवस्था देखिरहेको छ नि ?
हो, कहिलेकाही द्वैध मनस्थिति, चरित्र र क्रियाकलापहरू पार्टीभित्र देखिन खोजेका हुन् तर पनि त्यसैको बीचबाट हामीले आˆना निर्णय लिएर अगाडि बढिरहेका छौ । अब विगतबाट सिकेर हाम्रो आˆना निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छौ ।
० अस्ति मात्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरणले जनसेनालाई सम्मानजनक समायोजन नगरे फेरि जनयुद्ध सुरु हुन्छ भनेर चेतावनी दिनुभएको छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
किरणजीले जनयुद्ध नै भन्ने शब्द त प्रयोग गर्नुभएको छैन । जनमुक्ति सेना, जनताका अधिकारका कुरालाई न्यायोचित ढङ्गले सुनिश्चित गरिएन भने जनता संघर्षमा जान सक्छन् भन्ने कुरा उहाले राख्नुभएको छ । त्यसको लागि हामीले पार्टीमा संघर्ष गरिरहेका छौ । शान्तिप्रक्रियालाई माओवादीको आत्मसमर्पणसाग जोड्ने, अथ्र्याउने या अवतरण गराउने कुनै पनि निर्णय हामीलाई मान्य हुन सक्दैन । शान्तिप्रक्रिया नेपाली समाजको रूपान्तरणको आधार बन्नुपर्छ । त्यसको लागि जनमुक्ति सेनाको सम्मानजनक समायोजन, संविधानमा जनताका सम्पूर्ण अधिकारहरू सुनिश्चित हुनुपर्छ । यसो हुन सकेन भने त्यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन् ।
० नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका जनसेनालाई एक हप्ताभित्र फिर्ता पठाउने निर्णय भएको सुनिएको छ, के यो साचो हो ?
यो कुरा साचो होइन । मैले विशेष समितिका साथीहरू अनन्त र पम्फाजीसाग कुरा गरेा, बाहिर जे कुरा आयो, त्यो अनाधिकृत छ । त्यस दिनको बैठकमा नेताको सुरक्षामा रहेका जनमुक्ति सेना हटाउने विषयमा ‘ह’ पनि उच्चारण भएको थिएन ।
० अब जनमुक्ति सेनाको कसरी समायोजन होला त ?
समायोजनको ’boutमा माओवादी एकदम स्पष्ट छ । हामीले जनसेनाको समूहगत समायोजन हुनुपर्छ भनेका छौ । यसको मोडालिटी स्वतन्त्र निकायको रूपमा रहनुपर्छ ।
० सेना समायोजनको विषयमा तपाईंहरूकै नेताहरूबीच फरक-फरक धारणा रहेको छ र यसैले गर्दा सेना समायोजनको प्रक्रिया अड्किएको हो भन्छन् नि ?
छलफलमा जादा नेताहरूले केही कूटनीतिक भाषाहरू प्रयोग गर्दा हुन् । तर पार्टीको नीति र विचारलाई बदल्ने अधिकार नेताहरूलाई हुादैन । केन्द्रीय समितिले पारित गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ । कााग्रेस र एमालेका साथीहरूले यति बुझे हुन्छ कि नेताहरूको व्यक्तिगत धारणाहरू माओवादीको हकमा त्यति धेरै महत्व राख्दैन र केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ ।
० संविधानसभाको म्याद सकिन केही साता बाकी छ, के योबीचमा संविधानको पहिलो खाका आउन सम्भव छ ?
संविधानको खाकाको ’boutमा हामीभित्रै छलफल चलिरहको छ । खाका बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौ । तर, जनताका अधिकारहरूलाई नछोडी संविधानको खाका बनाउनुपर्छ । जनताका अधिकारलाई सम्बोधन नगरी खाका बनाइयो भने त्यो खाकाको अर्थ नै छैन, त्यसलाई त जनताले आगो लगाउाछन् । जनताको अधिकार नभएको संविधान खाकामा माओवादीको पूर्णतामा आओस् त्यसको कुनै औचित्य छैन ।
० संविधानको खाका आएन भने संविधानसभा विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि ?
संविधान निर्माणको काम समयले होइन, दृष्टिकोण र मतको कारणले अल्भिएको छ । संविधान समयमै नआउनु पछाडि काग्रेसको यथास्थितिवादी सोच र एमालेको ढुलमुले प्रवृत्ति जिम्मेवार छ । जनताका अधिकारबाट काग्रेस र एमाले तर्सिने गर्छन् । कााग्रेस, एमालेको अनावश्यक तर्साई र आतंक नै संविधान नबन्नुको प्रमुख कारण हो । त्यसबाट उहाहरूमाथि उठ्नुपर्छ । जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्दा काग्रेस, एमालेहरू आत्तिनुपर्ने कारण के छ र ? उहााहरूले थोरै मात्र जनताप्रति फर्किएर अगाडि बढ्ने आाट गर्नुभयो भने संविधानको खाका बन्छ ।
० माओवादीमा तपाईं एक जुझारु युवानेता हुनुहुन्छ, तपाईं आˆना कार्यकर्तालाई माओवादीमा अन्तरसंघर्ष छैन, अब क्रान्ति सफल हुन्छ भनेर कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
पार्टीभित्रका अन्तरसंघर्षहरू निष्पक्ष ढङ्गले स्थायी ढङ्गले र पुरानै ठाउामा रहादैनन् । पार्टीभित्र चल्ने अन्तरसंघर्षहरू निष्कर्षमा पुगेर टुङ्गन्छन् । माओवादी पार्टीमा नेतृत्वबीच नया ढङ्गले कार्य भाजन भएका छन् । सापेक्ष ढङ्गले हामी अन्तरसंघर्ष अहिलेलाई हल भएको छ । पार्टी पुरानै अन्तरसंघर्षमा छ भन्नु गलत हुन्छ ।
० मुलुक संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको छ, यस्तो अवस्थामा आमजनसमुदायलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ ?
हामी अहिले संक्रमणकालमा छौ । यस्तो अवस्था नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, राज्यलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने एउटा प्रक्रिया र अधिकारको रूपमा यो संक्रमणकाललाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको लागि नेताहरूले पहलकद्मी गर्नुपर्छ । सही विचार र नीति भएका नेता तथा पार्टीलाई कार्यकर्ता र जनताको साथ चाहिन्छ । सबैले मद्दत गरियो र एउटा शक्ति सञ्चित गर्न सकियो भने जनताका अपेक्षाहरूलाई शान्तिप्रक्रियाभित्रै रहेर सम्बोधन गर्न सकिएला भन्ने विश्वास छ । त्यो संघर्षको लागि सहयोग, सहभागिताको निम्ति सबैसग म आग्रह गर्दछु ।